Wasiir: Anaga iyo Kenya yaan dhexdeena lasoo galin | KEYDMEDIA ONLINE
27 July 2021 Fahad Yaasiin oo qaadey tallaabo uu ku aamusinayo qoyska Kiiska Ikraan
Wasiir: Anaga iyo Kenya yaan dhexdeena lasoo galin
Dowladda Soomaaliya ayaa diblumaasiyiinta ajnabiga ah ka codsatay inay faraha kala baxdo muranka iyo khilaafka kala dhaxeeya Kenya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Arimaha Dibada Maxamed C/risaaq oo ka hadlayay Madasha Iskaashiga Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya uu yahay mid labada dal ka dhaxeeya, oo aan loo baahnayn faragelin dibadda ah.
Wuxuu u sheegay diblumaasiyiinta ajnabiga ah ee kulanka ku sugnaan in dowladda Federaalka uga digayso dalalka shisheeye inay soo dhexgalaan xiisadda diblomaasiyasadeed ee labada dal ee deriska ah.
Wasiir Maxamed C/risaaq oo xilka ku cusub ayaa dhexda ka galay khilaafka uu Farmaajo ku raadinayo ololaha doorashadda inuu kusoo galo, oo shacabka Soomaaliyeed ku marin-habaabiyo inuu yahay kaligiisa wadani.
Farmaajo ayaa dalka ka cayriyay Safiirka Kenya Lucas Tumbo bishii lasoo dhaafay, wuxuuna u yeeray Tarsan, oo Soomaaliya u fadhiya Nairobi, iyadoo go'aankan lagu soo aadiyay xili doorasho.
Kenya ayaa sheegtay inaysan dowladda Soomaaliya kusoo wargelin safiirkeeda la eryay, islamarkaana eedeymaha loo jeediyay ee ah inay faragelin ku hayso arrimaha Jubbaland ay yihiin kuwa siyaasadaysan.
0 Comments Topics: farmaajo jubaland kenya soomaaliya
Warar 27 July 2021 10:56
Dagaalladan oo ah kuwo soo laalaabtay, ayaa salka ku haya gadood ka dhashay kadib markii maamulkii hore TPLF ay Gobolka Sitti hoos geeyeen maamulka Canfarta.